မျက်ကန်းမျိုးချစ် or Ultranationalists | Lumyo Chit
And as Ye Swe Win have pointed out, 26 of the Myanmar Alphabets Ah to La are exactly same as Bengali Alphabets. It is because both languages are derived from Brahmi Ancient Alphabets. I was almost shocked again when the Tamil Nurse told me their Vowels or words forming is based on, “Ah,Ar, Ei, Eee, Oo, Ooo, Aye, Air, Au Aur, An Arr” same as Myanmar.
If Radical Myanmars or မျက်ကန်းမျိုးချစ် or Ultranationalists hate Muslims, Rohingyas, Kalars and Bengalis they should stop writing in Kala Alphabets and start to use Chinese or Roman alphabets to avoid been seen as Kala Byets.
FB of Ye Swe Win မြန်မာအက္ခရာဗျည်း ၃၃ လုံးဟာလည်း ဘင်္ဂါလီအက္ခရာ ဗျည်းတွေနဲ့ အစီအစဉ်တူနေတဲ့အတွက် ပြင်သင့်တယ်။ အင်္ဂလိပ်ဗျည်းလိုအစီအစဉ်ပြောင်းသင့်တယ်။ အ၊ ဘဂုန်း၊ စလုံး ABC…
ကကြီးကနေ လအထိ ၂၈ လုံး အစီအစဉ် အတိအကျတူတယ်။ ပိုဒ်စုံရတူမှာ ကာရံယူပုံသဘောတရားတူတယ်။ ဥပမာ မဲဇာတောင်ခြေ၊ သဲသာသောင်မြေ၊ ပွဲခါညောင်ရေ၊ နေခြည်ဖြာမှနွေးသောကြောင့်၊ လေပြည်လာကအေးသောကြောင့်၊ ရွှေပြည်သာကဝေးသောကြောင့်(ရည်ညွှန်း ဆရာပါရဂူ) কka খkha গga ঘgha ঙṅa চca ছcha জja ঝjha ঞña টṭa ঠṭha ডḍa ঢḍha ণṇa তta থtha দda ধdha নna পpa ফpha বba ভbha মma যya রra
FB of Ko Zaw Zaw ဘင်္ဂါလီ အရေး … ခုိုးဝင်လာသူများ အရေး … တုိုင်းပြည်အတွင်း မှာ ဆုညံ ပွက်လော ရုိုက်အောင် ဖြစ်နေရသည့် အကြောင်းရင်းများစွာ ထဲမှ .. အရေးကြီးဆုံး အပုိုင်းကုို တင်ပြဆွေးနွေး ရေးသားမှု များ မတွေ့ရသေးပါ .. ကုိုယ့်တုိုင်းပြည်ထဲ ကို နုိုင်ငံခြားသားများ ခုိုးဝင်ဖို့ ဆုိုသည် မှာ အမှန်တကယ် လွယ် ကူသည့်ကိတ်စ မဟုတ်ပါ .. တုိုင်းပြည်အုတ်ချုပ် မင်းလုပ်နေ သည့် စစ်အစိုးရ ၏ ဆုိုးမွေ ဟုသာ ပြောရတော့မည် .. သူအာဏာတည်မြဲရေး အတွက် .. ဝန်ထမ်း များကုို လာဘ်စားချင်းတုိုင်းစား .. လုပ်ချင်တုိုင်း လုပ်ခွင့် ပေးထားကာ တုိုင်းပြည်ကုို ပျက် ယွင်းအောင် ပြုလုပ်ခဲ့သည့် လုပ်ရပ်များ ၏ အသီးအပွင့်များ (တနည်း .. ဆုိုးမွေများ) ဖြစ်သည် .. ဒါကုို … ထင်ယောင်ထင်မှား နှင့် တောင်ဆဲ မြောက်ဆဲ လျှောက် ဆဲနေကြသည် … ဆဲနေရုံ နှင့် မပြီးပါ .. ဘာမှလည်း ဖြစ်မလာပါ .. ကျနော်တုို့ ပြည်သူ အချင်းချင်းသာ သွေးကွဲ .. အမုန်းများ ပီး .. စုစည်းမှု မရှိ ဖြစ်ကာ .. တုိုင်းပြည်တုိုးတက် ချမ်းသာရေး .. ဒီမုိုကရေစီ အရေး ဝေးနေရုံသာ ရှိနေတော့မည် .. ထုိုပုံစံ သည် ပင်လျှင် … အနှီ အစုိုးရ ၏ အကြိုက် ဖြစ်နေပါသည် .. ဆင်ခြင်ကြပါကုန် ဟု တုိုက်တွန်း ချင်ပါသည် …
FB of Ko Zaw Min Tun ရွှေအိုင်ဒီယာများစာအုပ်ထဲက ယဉ်ကျေးမှုတွေ ပြန်အိပ်မက်ဖို့ ပန်းဦးဆက် ဓလေ့ကို ဖော်ထုတ်မယ်။ ယဉ်ကျေးမှုထိန်းသိမ်းရေး ဆရာမကြီး တအုပ် ဘယ်သူတွေ သတို့သမီး လုပ်မလဲ?
မြစ်ဆုံ… ရိုဟင်ဂျာနဲ့ရေပိုင်နက် ငါတို့ သည်းခြေပျက်နေရပေါ့။ ဒါကြောင့် တဝမ်းပူ၊ ဘကုန်း အက္ခရာ ၃၃ လုံးထဲမှာ အသေမုန်းတယ်။
လျှပ်စစ်စာမျက်နှာပေါ်မှာ တောက်တချက်ခေါက် ဦးနှောက်ထဲမှာ အကြံဥာဏ် ဟုန်းဟုန်းတောက်တယ်။
တဂိုးရဲ့ ကဗျာစာအုပ်တွေရယ်ကို မီးရှို့ပစ်ရမယ်။
← In 1824, some Malay States, Thai, Laos, Cambodia and eastern India under BURMA
မြန်မာမွတ်စလင်အစည်းအရုံး၏ မေးမြန်းချက်နှင့်ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်၏ ဖြေကြားချက် များ →